कास्की-२ बाट स्व. रविन्द्र पत्नी विद्या बन्लिन् नेकपा उम्मेदवार ?
Tue, May 26, 2020 at 4:24am
आईतवार, ५ असोज २०७६,	आहाखबर	8.66K
पोखरा, ५ असाेज ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा'का नेता बामदेव गौतमले दोश्रो पटक कास्की–२ बाट निर्वाचन नलड्ने प्रष्टीकरण पुनः दिएका छन् ।
यसबारेमा उनले कारण पनि उल्लेख गरेका छन्, 'यसअघि ९२०७४ मा० प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया–१ बाट उम्मेदवार भएको यहाँहरुमा विदितै छ । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग विपक्षीको तुलनामा ३२ हजार मत बढी थियो । तर, म पराजित हुनुपर्यो । त्योभन्दा अत्यन्त कम मतान्तर रहेको कास्कीमा निर्वाचन उठ्नु भनेको म फेरि पराजित हुनु हो ।'
बामदेवको यो घोषणासँगै नेकपाबाट कास्की २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार को भन्ने प्रश्नले फेरि चर्चा पाएको छ । बामदेव नै उम्मेदवार बन्ने भनेर प्रचार गर्ने नेकपा कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन् । बलिया उम्मेदवार मानिएका गौतम ‘रिङआउट’ हुने घोषणाले नेकपाको उम्मेदवार को बन्ला भन्ने अनुमान थप रहस्यपूर्ण बनेको छ । यसको टुंगो कास्की नेकपाले छिट्टै लगाउला।
नेकपा कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापाले भने, 'उम्मेदवार त केन्द्रले नै टुंग्याउनेछ, हामीले आन्तरिक तयारीमात्रै गरेका छौँ, आधिकारिक सुझाव मागे दिने हो, अन्यथा केन्द्रले जे भन्छ, त्यही हुन्छ ।'
तर, केन्द्रले कहिले टुंगो लगाउँछ, त्यो भने थाहा छैन । बामदेवले चुनाव नलड्ने घोषणासँगै पुनः एकपटक प्रबल उम्मेदवारको सूचीमा आएकी छन्, स्व. रवीन्द्रपत्नी विद्या भट्टराई । यसअघिझैँ उनले स्पष्ट जवाफ भने दिइनन् । तर, एक हप्ताभित्र टुंगो लाग्न सक्ने संकेत चाहिँ दिइन् ।
'अझै एक हप्ता कुरौँ, केही आउला । मेरो आकांक्षा भन्दा पनि परिस्थितिका कुराहरु हुन,” उनले भनिन् । शीर्ष तहका नेताहरुसँग कुराकानी भएको होला नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्, “भइसकेको छैन, हुँदै होला ।'
विद्यामात्रै होइन, आधा दर्जन आकांक्षी छन्, नेकपामा । तर, उम्मेदवारकै विषयलाई लिएर छलफल भने भएको छैन । कास्की नेकपा अध्यक्ष कृष्ण थापाले भने, 'म उम्मेदवार हुन्छु भनेर अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन ।'
नेकपाबाट विद्याको अलावा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, तुलबहादुर गुरुङ, धनराज आचार्य, राजकाजी गुरुङ 'करण' श्रीनाथ बराल, शारदा सुवेदी, भीम कार्की लगायतको चर्चा भइरहेको छ ।
पूर्व माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा पराजित राजकाजी गुरुङ 'करण' कास्की २ ‘ख’ बाट पराजित प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार समेत हुन् । कास्कीमा विद्या नउठेको खण्डमा र वामदेवको मनशाय नभएको खण्डमा बलिया दाबेदारको रुपमा पुराना नेता सोमनाथ अधिकारीको सम्भावना बलियो रहेको स्वयम नेकपाका नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।
गएको फागुनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित गौतम उपनिर्वाचनमा लड्ने गाईंगुईं उतिबेलै चलेको थियो । काठमाडाैं फर्केपछि गौतमले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै कास्कीबाट उम्मेदवारी नदिने र उपनिर्वाचनमा नलड्ने कुरा बताएका थिए ।
त्यतिबेला सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तय भने गरेको थिएन । गत साउनमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणासँगै गौतम पुनः चर्चामा आए । यतिसम्म कि गौतमलाई नेकपाका दुवै अध्यक्षले नै समर्थन गरेको चर्चासमेत भयो । तर, शनिबार पुनः गौतमले कास्कीबाट उपनिर्वाचन नलड्ने घोषणा गरे ।